Home Siyaasadda Kenya oo ku tumatay Qaranimaddii Somalia.
Kenya oo ku tumatay Qaranimaddii Somalia.
Mogadishu ( Radio halgan ) Dowladda kenya ayaa isku dayeyso inneey lasoo baxdo Awooddii aay ku laheyd gudaha Somalia kadib markii aay shan sanno iyo dhowr bilood dibad joog ka aheyd siyaasadda Somalia gudaha iyo Dibadda oo aay ku wareertay iskanna xirtay Mallafka Somalia.
Hadda waxa aay billowday Dowladda kenya inneey tijaabiso Dowladda cusub ee uu hogaamiyo Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud tijaabadda kobaad waxa aay noqotay in waxba kamma jirraan ka soo qaaddo Qaranimadda Somalia kadib markii Dowladda kenya shir iskuggu wacday dhamaan Safiiradda caalam-ka uu fadhigooddu yahay magaaladda Nairobi ee xarunta Dalka Kenya shirkaas-ne laggu casuumay safiir laggu sheegay innuu matalo Somaliland iyo callan Somaliland laggu yaqaan oo goobta shirka lagga taagay.
Hall-ka shirka waxaa immaaday safiirka Somalia Ambassador Tarsan balse wuu iskagga baxay shirka marka uu arkay safiir laggu sheegay innuu matallo Somaliland iyo astaanta calankoodda.
marka uu baxay Ambassador Tarsan wax ka daba tagay majiraan Amma garowsho ah oo Dowladda Kenya ka bixisay arrinta ayaanna u muuqatay mid laggu tijaabinaayo falcelinta ka’imaandoonto Dowladda Somalia uu hogaamiyo Hassan Sheikh Mohamud.
Kenya ayaa u arragto madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud innuu yahay hogaamiyo waxba ka diiddi karrin sidda Ahmed Madoobe balse shacabka Somalia ayaa ka war sugaayo wasaaradda arrimaha Dibadda ee Somalia falcelinteedda iyo waxa aay ka dhahdo arrintaan.
Tan kalle isbuucayadda soo socdo ayaa loomadalsanaa in Qaadka Kenya lakeenno suuqyadda Somalia kenyane wax dhib ah umma arragto safiirka Somaliland innuu arqalad ku noqon doonno hishiiskii Qaarka ee lakalla saxiixday Somalia iyo Kenya.
Previous articleHaddaba tallaabo noocee ah ayuu madaxweyne Xasan Sheekh qaadi doonaa?
Next articleDhaqaale Intee Le’eg Ku Baxay Dib u Dhiska Xaruntii Xisbiga ee Muqdisho? – Dhaqaale intee le’eg ku baxay?
Daawo: CC Shakuur: Xasan Sheekh qabiil laguma taageerin balse waxaa jiray…